18 Koorsooyin Maareyn Online oo Bilaash ah oo wata Shahaadooyin 2022
18 Koorsooyin Maareyn Khadka Tooska ah oo Bilaash ah oo wata Shahaadooyin
Halkan, waxaad ku baran doontaa dhowr koorsooyin maareyn oo bilaash ah oo bilaash ah oo leh shahaadooyin ay bixiyaan jaamacado kala duwan, kulliyado iyo ururo ganacsi oo adduunka oo idil ah, oo loogu talagalay in lagu qalabeeyo bartayaasha xirfadaha saxda ah ee ka caawin doona iyaga inay ku guuleystaan ​​aqoontooda iyo xirfadahooda guud. maaraynta.
Internetku wuxuu aduunka siiyay faa iidooyin iyo fursado aan xadidneyn, qayb walbana way ka faa iidaystay, iyadoo wali laga faa iidaysanaayo fursadahan ku yimid ikhtiraaca internetka iyo hada oo kaliya dhawr jeer oo aad ku garaacayso taleefankaaga casriga ah ama kaniiniga ama kombiyuutarka, waxaad tahay u soo bandhigtay balaayiin macluumaad.
Muhiimadda internetka ayaa sidoo kale muujisay faa'iidadeeda dhinaca waxbarashada oo hadda waxaad ka heli kartaa helitaanka macluumaad aan dhammaad lahayn oo ku saabsan koorso kasta oo aad xiiseyneyso, waad raaci kartaa oo aad heli kartaa barnaamij kasta oo shahaado ah oo aad dooratay illaa intaad ka heleyso shuruudaha looga baahan yahay ku soo biir barnaamijkaas; dhammaan khadka tooska ah.
Barashada khadka tooska ah waa, hadda, kacaankii ugu weynaa ee waaxda waxbarashada oo leh faa iidooyin badan iyo fursado badan, dad badan ayaa u adeegsanaya si ay ugu fududaato waxbarashadooda, iskuna xoojiyaan xirfado kala duwan oo la dejiyey, aqoon iyo inay horumariyaan xirfadooda si aad u sareysa Marxalad.
Qiyaastii qof kastaa wuu kaqeybqaadan karaa barnaamijyada barashada internetka, illaa intaad aragtay koorso khadka tooska ah oo aad xiiseyneyso sidoo kale waxaad sidoo kale leedahay go'aan ah inaad bilowdo oo aad dhammaystirto maxaa yeelay barashada khadka tooska ah waxay la imaan kartaa waxyaabo badan oo kaa mashquuliya, oo ah inaad rabto inaad uga jawaabto WhatsApp la sheekaysiga si loo duufsado si aad u aragto fiidyow YouTube ah oo ka baxsan dulucda koorsadaada.
Waad ku guuleysan kartaa barashada khadka tooska ah marka aad goaansato, ka dib, waxaad si fudud u kobcineysaa xirfaddaada adiga oo isku diyaarinaya hal ama in ka badan oo xirfado ah, kor u qaadida jaranjarada tacliinta oo aad xitaa xirfadle u noqoneyso aqoon kasta oo aad hesho.
Halkan kuma eka halkaan, xirfadahaaga sidoo kale waxaa aqoonsan macaamiisha iyo loo shaqeeyaha laga yaabo inay u baahdaan xirfadaada ganacsi ama urur.
Xitaa way fiicnaaneysaa markaad hesho shahaado markaad dhammaystirto koorso internetka ah, helitaanka shahaadada aagagga koorsada ee aad dhammaysatay ayaa kuu fureysa fursado shaqo oo badan, waxaana si dhakhso leh lagugu aqoonsan yahay xirfadahaaga shaqo-bixiyeyaasha iyo / ama macaamiisha internetka, waad go'aansato inaad iskaa u shaqeyso, u shaqeyso urur ama aad sameysato ganacsi kuu gaar ah laakiin si kasta oo ay doontaba ha noqotee, waxaad lacag uga heleysaa xirfadda aad heshay.
Sidoo kale, nooca xirfadda aad rabto inaad ku barato khadka tooska ah waa muhiim, had iyo jeer hubi inaad heshay xirfad waxtar u yeelan doonta meheradda casriga ah oo aan ahayn oo keliya xirfad qadiim ah, taasi waxay uun noqon doontaa xoogaa waqti lumis. Tani waa tan aan ku qorayo maqaalkan koorsooyinka maareynta khadka tooska ah ee bilaashka ah oo leh shahaadooyin ku habboon xilligan.
Ku saabsan Koorsooyinka Maareynta Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee wata shahaadooyinka
18 Koorsooyin Maareynta khadka tooska ah oo bilaash ah oo wata shahaadooyin
Shahaadada khadka tooska ah ee bilaashka ah ee aasaasiga ah ee Qorshaynta Mashruuca iyo Maareynta
Shahaadada khadka tooska ah ee bilaashka ah ee Xirfadaha Maareynta Dadka
Shahaadada khadka tooska ah ee bilaashka ah ee ka gudubka saaxiibkaa ilaa hogaamiyaha
Shahaadada khadka tooska ah ee bilaashka ah ee Tababbarka Maareynta & Xirfadaha Hogaaminta
Shahaadada khadka tooska ah ee Bilaashka ah ee Go'aan Qaadashada: Sida loo Xulo Dhibaatada Saxda ah ee Xallinta
Shahaadada khadka tooska ah ee bilaashka ah ee iskaashiga ka shaqeynta koox fog
Shahaadada Maareynta Khadka Tooska ah ee Bilaashka ah ee Aasaasiga Ganacsiga: Maareynta Mashruuca
Shahaadada internetka ee bilaashka ah ee isgaarsiinta iyo xirfadaha shaqsiyadeed ee shaqada
Shahaadada khadka tooska ah ee bilaashka ah ee Hordhaca Maareynta Ganacsiga
Ku Bilowga Agile iyo Naqshadeynta Shahaadada Bilaashka ah ee Khadka Tooska ah
Shahaadada khadka tooska ah ee bilaashka ah ee Maareynta Mashruuca: Marka laga soo tago aasaasiga
Shahaadada Online-ka ee Bilaashka ah ee Maamulka iyo Hoggaaminta: Hoggaaminta Koox
Shahaadada khadka tooska ah ee bilaashka ah ee Maareynta Khatarta
Shahaadada khadka tooska ah ee bilaashka ah ee maskaxda ee samaqabka iyo waxqabadka ugu sarreeya
Shahaadada Khadka Tooska ah ee Bilaashka ah ee Farsamooyinka Maareynta Ururka Lean Heerka 2
Shahaadada khadka tooska ah ee Bilaashka ah ee Maareynta iyo Hoggaaminta: Kobcinta Maareeye ahaan
Shahaadada khadka tooska ah ee bilaashka ah ee Maareynta Xarumaha
Shahaadada khadka tooska ah ee bilaashka ah ee Saadka iyo Maareynta Qalabka
Gunaanad mawduuca: Koorsooyin Maareyn Khadka Tooska ah oo Bilaash ah oo wata Shahaadooyin
16 Kooras Online ah oo bilaash ah oo Koonfur Afrika ah oo wata shahaadooyin.
38 Koorsooyin Jaamacadeed oo bilaash ah oo wata shahaadooyin .
50 Kooras Online ah oo bilaash ah oo Harvard ah oo wata shahaadooyin.
37 Koorsooyin bilaash ah oo Coursera ah oo ay la socdaan Xiriiradooda Codsiga.
Shirkad kasta, urur kasta, iyo ganacsi kastaa waxay u baahan yihiin shakhsiyaad leh xirfado maamul si ay u kormeeraan sida wax loo qabanayo maadaama ay go’aamiso horumarka ganacsigaas. Waxay ku qaadataa shaqsi leh karti iyo hufnaan maarayn xirfadeed maamul si uu ugu hoggaamiyo urur guul.
Waxaa jira noocyo kala duwan oo doorar maamul ah oo ka jira adduunka ganacsiga casriga ah waxaadna ka qayb qaadan kartaa mid ama in ka badan oo iyaga ka mid ah, inta aad qaban karto, doorarkan kala duwan ayaa diyaar u ah inay wax ku bartaan khadka tooska ah waxaana loogala hadlayaa faahfaahintooda qodobkan.
Koorsooyinka kala duwan ee maareynta khadka tooska ah ee aan ku bixiyay maqaalkani waa bilaash in wax la barto, dhammaantood waxay u baahan yihiin lacag eber ah si ay ugu biiraan oo u bartaan waxayna sidoo kale la yimaadaan shahaadooyin aad bixin doontid waxoogaa lacag ah si aad u hesho caddayn ahaan inaad si sax ah u tababbartay oo aad xirfad u leedahay jagadaas gaarka ah ee maamulka ee ururka.
In kasta oo aad leedahay xirfad jirta, laga yaabee qayb kale oo ka mid ah maamulka ama xirfad kale oo dhan, waxaad weli ka dooran kartaa mid ka mid ah koorsooyinka maareynta tooska ah ee maareynta leh shahaadooyinka aan hoos ku taxay oo aad u kobciso xirfaddaada, aqoonta aad u hesho, waxay sare u qaadeysaa fursadahaaga inaad ku guuleysato adduunka ganacsiga maanta.
Waxaa jira in kabadan boqol koorso oo maareynta khadka tooska ah ah oo halkaas ka socda, labadaba waa bilaash iyo lacag, laakiin qaar iyaga ka mid ah runti faa'iido kuma lahan adduunka ganacsiga maanta waana meesha maqaalkani uu aad muhiim ugu yahay sidii aan u soo ururiyey, kaliya ma ahan kuwa ugu fiican, laakiin Xirfadaha maamulka ee ugu faa iidada badan uguna badan ee la raadsado si aad adigu xirfad u leedahay sidoo kale aad qiimo qaali ugu noqoto naftaada iyo shaqaalahaagaba.
Iyadoo aan la sii raacin, hoosta waxaa ku qoran liiska ou koorsooyinka maareynta khadka tooska ah ee ugu fiican ee bilaashka ah oo wata shahaadooyin.
(Koorsooyinka Maareynta Khadka Tooska ah)
Koorsooyinka maareynta internetka ee bilaashka ah ee ka muuqda liistadayda waa;
Shahaadada khadka tooska ah ee bilaashka ah ee aasaasiga ganacsiga: Maareynta Mashruuca
Koorsadani waa mid ka mid ah koorsooyinka ugu wanaagsan ee maareynta khadka tooska ah ee bilaashka ah oo leh shahaadooyin ay bixiso Jaamacadda Virginia iyada oo loo marayo FutureLearn.
Koorsada waxaa loogu talagalay in lagu baro ardayda xiisaha u leh aasaaska qorshaynta mashruuca iyo maaraynta isla markaana lagu qalabeeyo xirfadaha iyo aqoonta saxda ah si ay ugu gutaan howlaha si wax ku ool ah goobta shaqada ama nolol maalmeedka.
Xirfad noocan oo kale ah, adeegyadaada waxaa looga baahan doonaa ururo badan, khadka tooska ah iyo qadka. Qof kastaa wuxuu ubaahan yahay maareeye mashruuc hufan wayna fiicnaaneysaa markii lagaa shahaado aagga sidoo kale waxaad qoto dheer kartaa aqoontaada maadada sidoo kale.
Maareynta dadku waa shaqo aad xasaasi u ah, waxay u baahan tahay gebi ahaanba xirfado iyo kartiyo iyo is-edbinta sidoo kale. Markaad fahanto habka saxda ah ee loo maareeyo dadka, ganacsigaaga ayaa hubaal noqon doona mid guuleysta waqti kadib.
Koorsadan 5-toddobaad ee maaraynta lacag la’aanta ah waxay baraysaa bartayaasha maaraynta dadka iyo horumarinta qaababka is-maamul. Waxaad sahamin doontaa qaababka ugu waaweyn, xeeladaha iyo mabaadi'da loo baahan yahay si aad u noqotid maamule kheyraad wax ku ool ah urur ama ganacsi.
Tani waxay u muuqan kartaa inaysan u ekaanin koorsooyinka kale ee maareynta joogtada ah ee maareynta joogtada ah laakiin waa 100%. Xaqiiq ahaan, tani waa mid ka mid ah koorsooyinka maareynta ugu fiican ee aad halkaas ka heli karto.
Hogaamiyayaashu sidoo kale maareeyayaal waana inaad ku dhex yeelataa tayadaas maarayn si adiga loogu aqoonsado inaad mid tahay, oo inaad noqoto hogaamiye wax ku ool ah ayaa ah waxa run ahaantii muhiim ah.
Waad noqon kartaa hogaamiye wax ku ool ah adoo ku biira koorsadan khadka tooska ah ee bilaashka ah, waxaad horumarin doontaa awoodaada fekerka ee muhiimka ah waxaadna awood u yeelan kartaa inaad naftaada taageerto inta lagu jiro u guuritaanka maamulka adoo fulinaya istiraatiijiyado wax ku ool ah oo lagu guuleysto.
Ma maamule ama agaasime guud ayaad ka tahay urur mise waxaad ku hamiyaysaa inaad ka mid noqoto ururkaaga? Waa inaad qaadataa koorsadan maareynta khadka tooska ah ee bilaashka ah si aad u xoojiso kartidaada hoggaamineed oo aad horay ugu socoto shirkaddaada.
Koorsadan, waxaad kuheli doontaa hogaamin heer sare ah iyo karti maamul oo wax ku ool ah oo ay kujiraan sida loola macaamilo isku dhaca, wareysiga iyo u haynta dadka saxda ah, maareynta iyo abaabulka waaxdaada si loo gaaro himilooyinka la dajiyay, iyo xirfad kasta iyo aqoon kasta oo kaa caawin doonta inaad guuleysato hogaamiye ahaan.
Koorsadani waa mid ka mid ah koorsooyinka maareynta khadka tooska ah ee maamulka tooska ah ee bilaashka ah oo leh shahaadooyin waxayna haysaa xirfad aad u muhiim ah oo maamule kasta ama maamuleyaal hammi leh u baahan yihiin inay yeeshaan.
Koorsadu waxay kugu horumarineysaa kuna qalabeyneysaa fikirka muhiimka ah iyo xirfadaha gorfeynta ee aad si fudud ugu codsan karto xalinta dhibaatooyinka nolosha dhabta ah ee ka jira urur sidoo kale aad awood u leedahay inaad sameyso go'aanno wax ku ool ah sidoo kale.
Tani waa mid ka mid ah koorsooyinka maareynta khadka tooska ah ee bilaashka ah oo leh shahaadooyin ay bixiso Jaamacadda Leeds, UK.
Koorsadani waxay ku siinaysaa aqoonta aad kula shaqeyn karto dadka kale meel kasta oo aad adduunka ka joogtid oo aad weli soo saarto natiijooyin aad u fiican. Koorsadan khadka tooska ah ee bilaashka ah waxay waxtar badan u leedahay iskaa wax u qabso iyo farsamooyinka fog.
Tani waa mid ka mid ah koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee maareynta leh shahaadooyin ay bixiyaan Iskuulka Ganacsiga ee Jaamacadda Furan.
Koorsada waxaa loogu talagalay inay ku siiso xirfado aasaasi ah oo ku saabsan sida si wax ku ool ah loogu maareeyo dhammaan wejiyada socodka nolosha iyadoo la adeegsanayo istiraatiijiyad sax ah, farsamooyin, iyo qalab.
Ma dooneysaa in laguu cusbooneysiiyo jagadaada hadda ee shaqada, laga yaabee inaad maamule ka noqoto waax gaar ah? Markaa waa inaad haysataa wax, sida xirfad, taas oo noqon doonta mid wax ku ool ah oo ay dareemi karaan kuwa kaa sarreeya waxaadna ku bilaabi kartaa adoo qaadanaya koorsadan khadka tooska ah ee bilaashka ah si ay kaaga caawiso horumarinta xiriirka iyo xirfadaha dadka dhexdooda ah ee shaqada.
Koorsadani waa mid ka mid ah koorsooyinka ugu sarreeya ee bilaashka ah ee maareynta ee leh shahaadooyin waxayna kaa caawin doontaa inaad hesho xirfado isgaarsiineed oo wax ku ool ah. Horayba maareeyayaasha waxqabadka leh ayaa qaadan kara koorsadan oo waxay ku xoojin karaan xirfadaha isgaarsiinta ugu fiican goobta shaqada.
Koorsadan 4-isbuuc ah, koorso is-socod ah oo ka mid ah koorsooyinka internetka ee bilaashka ah ee maareynta leh shahaadooyin waxaana loogu talagalay in lagu baro qof kasta oo xiiseynaya sida loo isticmaalo loona isticmaalo si wax ku ool ah fikradaha ganacsiga, qalabka iyo ereyada iyadoo la sahaminayo afarta dhinac ee waaweyn ee ganacsiga maaraynta oo kala ah; maareynta lacagta, maareynta dadka, maareynta macluumaadka iyo awoodda fahamka iyo maaraynta naftiisa.
Dhamaadka koorsadan, waxaad awoodi doontaa inaad ku dabakho xirfadahaaga cusub ee la helay xaaladaha ganacsiga ee caadiga ah isla markaana aad u sharraxdo dhinacyada muhiimka ah ee fikradda ganacsiga macaamiisha mustaqbalka iyo maalgashadayaasha.
Si buuxda khadka tooska ah, is-socodsiiya oo waxay qaadataa toddobaadyo 4 si loo dhammaystiro, koorsada, Bilaabidda Agile iyo Fikirka Naqshadaynta, waa mid ka mid ah koorsooyinka maareynta khadka tooska ah ee bilaashka ah ee shahaadooyinka ay bixiyaan Jaamacadda Virginia.
Koorsadu waa horudhac horumarinta wax soo saarka degdegga ah iyo fikirka naqshadeynta si aad u dhisi karto wax soo saar wanaagsan oo dijitaal ah.
Waxaad sidoo kale baran doontaa waxa agile yahay iyo sida ay u fududeyso go'aan gaarista iyo horumarinta wax soo saarka urur.
Kani waa mid ka mid ah koorsooyinka maareynta khadka tooska ah ee bilaashka ah oo leh shahaadooyin waxaanan siiyay faahfaahinta aasaasiga u ah maareynta mashruuca xitaa waxaan kula taliyay in kaqeybgalayaashu ay balaariyaan oo ay qoto dheeraadaan aqoontooda ku saabsan mawduuca, koorsadan maaraynta tooska ah ee internetka ayaa sidaas sameysa.
Koorsadan, waad ka gudbi doontaa aasaaska maareynta mashruuca, adoo ku kordhinaya aqoon ballaadhan, oo qoto dheer kan aad horey u soo ururisay sidaasna ku kordhinaya xirfaddaada iyo qiimahaagaba.
Maamule ahaan, dhisida iyo ku hogaaminta koox guul waa sababta ugu weyn ee laguu siiyay doorka meesha ugu horeysa laakiin waxay u baahan tahay shaqo badan iyo xirfado gorfeyn ah si aad ugu hogaamiso koox iyadoo tilmaamaha saxda ah aad ku baran karto xirfadaha lagama maarmaanka u ah hoggaaminta koox.
Koorsadan khadka tooska ah ee bilaashka ah, Maareynta iyo Hoggaaminta: Hoggaaminta Koox waxaa loogu talagalay inay kugu xoojiso xirfadaha nooca saxda ah ee aad u baahan tahay si aad ugu hoggaamiso koox si guul leh iyo sidoo kale inaad karti u yeelato horumarinta iyo dejinta qorshe hawleed aad ku taageerto horumarkaaga shaqsiyeed.
Fursad kasta oo timaada waa in laga fiirsadaa halista la imaanaysa, sidaa darteed waa muhiim in si taxaddar leh loo falanqeeyo fursad kasta si loo hubiyo inay mudan tahay in la qaato.
Maadaama aad tahay maamule halista ah, waxaad qiimo weyn ugu fadhidaa urur maaddaama aad mas'uul ka noqon doonto booska muhiimka ah ee falanqeynaya halista ku imaaneysa fursad kasta.
Waxaad ku kasban kartaa xirfadaha noqoshada maamulaha halista wax ku oolka ah adoo ku biiraya koorsadan khadka tooska ah ee bilaashka ah iyo suurtagalnimada helitaanka shahaadada oo kaa dhigi doonta mid qiimo badan inaad soo bandhigto ama shaqaale mustaqbalka ah ama waxaad go'aansan kartaa inaad aqoonta u adeegsato meheraddaada.
Inaad noqoto maamule, agaasime guud ama hogaamiye guud waxay noqon kartaa mid aad u baahan mararka qaarkoodna aad u walaac badan. Tani waxay mararka qaar sababi kartaa waxqabad xumo iyo soo bandhigida cilladaha suurtogalka ah.
Koorsadani waxay kaa caawin doontaa inaad dib u soo ceshato waxqabad hoggaamineed oo wax ku ool ah iyadoo kaa caawin doonta inaad yareyso buufiska iyadoo loo marayo farsamooyinka maskaxda ee kala duwan ee lagu bari doono inta lagu guda jiro casharka.
Koorsadan kadib, awoodaada aad ku maareyn karto culeyska maskaxda kuna xoojineyso waxqabadka waqtiyada xasaasiga ah waa inay hubaal tahay in la hagaajiyo waxaana lagaa filayaa inaad noqoto mid ka tayo iyo waxtar badan sidii hore.
Kani waa mid ka mid ah koorsooyinka onlaynka ah ee bilaashka ah ee maaraynta oo wata shahaadooyin waxayna barayaan bartayaasha xiisaha u leh inay noqdaan ciyaartoy koox wax ku ool ah oo ka shaqeeya shaqada iyo inay ogaadaan sida loo hirgeliyo hagaajinta ganacsiga.
Waxaad sidoo kale fahmi doontaa faa'iidooyinka jawiga shaqada caatada ah, waxaad awood u yeelan doontaa inaad ku dabaqdo horumar joogto ah doorkaaga hadda iyo mustaqbalka iyo koorsada sidoo kale waa mid ku habboon PRINCE2 iyo daraasadda Lean Six Sigma.
Ma dooneysaa inaad maamule noqoto ama aad rabto inaad mid noqoto, ama inaad ganacsigaaga maareyso ama aad qof u shaqeyso? Markaa waa inaad tixgelisaa qaadashada koorsadan maareynta khadka tooska ah ee bilaashka ah, oo kuusoo bandhigaysa xirfadaha aasaasiga ah iyo aqoonta aad ku noqonayso maamule dhammaadka koorsadana waxaad ku helaysaa shahaadada saxda ah.
Mid ka mid ah koorsooyinka maareynta tooska ah ee maareynta khadka tooska ah ee internetka leh shahaadooyinka goobta wax lagu barto ee khadka tooska ah loogu talagalay inay ku baraan wax ku saabsan shaqooyinka, astaamaha iyo ujeeddooyinka ah inaad ku guuleysato maamule xarun taas oo ku siinaysa fursad aad ku qaadatid aqoontaada iyo xirfaddaada heerka ku xiga.
Maalin kasta, ganacsatadu waxay maraan nidaamka silsiladda waxay ka imaan kartaa soosaarayaasha ilaa adeegyada gudbinta ee xarumaha kaydinta ilaa dukaamada tafaariiqda, geeddi-socod kasta waa muhiim oo haddii qayb ka mid ah la gooyo waxay noqoneysaa mid aan dhammaystirnayn oo aan guuleysan taasna waa sababta ay ugu baahan tahay maareeyayaasha inay u arkaan habka .
Haddii aad xiiseyneyso inaad noqoto maamule logistikada iyo maareynta silsiladda sahayda waa inaad ka fiirsataa qaadashada koorsadan, waxay kugu qalabeyn doontaa xirfado aad ku noqon karto maamule wax ku ool ah oo aad si guul leh ugu socodsiiso howlaha ganacsiga.
Tani waxay soo afjaraysa faahfaahinta ku saabsan 18 koorsooyinka maareynta khadka tooska ah ee bilaashka ah oo wata shahaadooyin, koorsooyinkan ayaa ah 100% khadka tooska ah, oo la heli karo oo si buuxda loo heli karo dhammaantoodna uma baahna wax shuruud ah si ay ugu biiraan iyaga oo ay u helaan xirfadda aad dooratay.
Koorsooyinkan waxaa loogu talagalay inay kugu qalabeeyaan xirfadaha maamul ee ugu dambeeyay iyo aqoonta looga baahan yahay xoogsatada casriga ah oo aad codsatid mid ama in ka badan oo ka mid ah shahaadooyinkan waxay sare u qaadi doonaan xirfaddaada waxayna kugu riixi doonaan jaranjarada tacliinta laakiin inta badan waxaad helaysaa inaad noqotid shaqsi qiimo leh naftaada, ururkaaga iyo loo shaqeeyahaaga.
Xirfadahan shahaado qaadashada waxaad sidoo kale go'aansan kartaa inaad sameyso madaxbanaan ama aad bilawdo ganacsi kuu gaar ah, xaqiiqdii, inta badan dadkii qaatay koorsooyinka waxay qaateen madaxbanaan waana guuleysteen inkastoo wali ay sii kordhayaan, adiguba sidoo kale waad ka mid noqon kartaa waa , fudud oo bilaash ah ku biir.
38 Koorsooyin Jaamacadeed oo Bilaash ah oo wata Shahaadooyin
50 Harvard Free Courses oo wata Shahaadooyin
Koorsooyinka Free Online wax ku barta internetka
koorsooyin maareyn online oo bilaash ah oo wata shahaadooyin
Previous Post:25 Jaamacadaha Sare ee Kanada ee loogu talagalay MBA
Post Next:Top 15 Jaamacadaha Poland ee Ardayda Caalamiga ah
Ntui Violet Mbey wuxuu leeyahay,
October 20, 2021 at 3: 13 pm
koorsada shahaadada iyo ciwaanka iimaylka yaan la daabicin.